Banyere Anyị - Dongguan Glorystar Laser Co., Ltd
Dongguan Otuto Star Laser Technology Co., LTD, Sino-German imekọ ihe ọnụ, na-elekwasị anya laser technology & ngwa, mgbe afọ nke na-aga n'ihu ọhụrụ na mmepe, na-a maara nke ọma nnukwu-ọnụ ọgụgụ emeputa nke laser akụrụngwa.
The ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ ụlọ, R & D Building, machining shop, eserese na ịgbado ọkụ shop, gbakọta shop, n'oge a na showroom na ọkọlọtọ ulo oru factory.
The ụlọ ọrụ bụ isi na ngwaahịa ndị metal laser ọnwụ igwe, na-abụghị metal laser ọnwụ igwe, laser marking igwe, laser ịgbado ọkụ igwe na-ekwe machines.The kwa afọ mmepụta ike nke 8,000 tent nke ngwaahịa na ere na ihe karịrị 100 mba na mpaghara.
The ụlọ ọrụ na-mara dị ka mba elu-tech enterprise, na ugboro ugboro na ndibọhọ technology Innovation Award. Dị ka onye ndú na laser ngwá, Glorystar Laser technology Co., Ltd nwere a zuru ezu R & D usoro, na ọtụtụ anụ ụlọ ma ama na mahadum na nnyocha oru ịnọgide na-enwe ezigbo ngwa anya na teknuzu imekọ ihe ọnụ, na-bụ Nanyang guzobe ememe nke sayensị na nkà na ụzụ Ukpep omuoru nwoke isi.
Ngwaahịa mere EU OA asambodo na SGS asambodo, na na akụkụ nile nke na-abata, usoro, igwe, mbupu na ndị ọzọ na nnabata na ISO àgwà na gburugburu ebe obibi management usoro management ụkpụrụ nduzi iji hụ na mba mma. Ebu Global ele anya, GLORYSTAR nọgidere na-na-elekwasị anya na laser sayensị na nkà na ụzụ na-eso gị na-eme n'ọdịnihu nke ọma!